Other | Myanma Port Authority
Post date: 03/Jan/2022
ပို့ကုန်များ တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အရ သွင်းကုန်များလည်း တိုးမြှင့်တင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ကုန်သေတ္တာသင်္ဘောလိုင်း အသီးသီးမှ ခရီးစဉ်များ ပြန်လည်တိုးချဲ့ပြေးဆွဲရန် စီစဉ်ထားရှိသဖြင့် ဇန်နဝါရီလ တွင် လတ်တလော ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘော(၄၉)စီး ပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ပြေးဆွဲမည့်စာရင်းအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ အသိပေး အပ်ပါသည်။
Post date: 15/Dec/2021
Container Vessel Scheduled for December 2021
Post date: 13/Dec/2021
ပို့ကုန်များ တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အရ သွင်းကုန်များလည်း တိုးမြှင့်တင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ကုန်သေတ္တာသင်္ဘောလိုင်း အသီးသီးမှ ခရီးစဉ်များ ပြန်လည်တိုးချဲ့ပြေးဆွဲရန် စီစဉ်ထားရှိသဖြင့် ဒီဇင်ဘာလ တွင် လတ်တလော ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘော(၄၃)စီး ပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ပြေးဆွဲမည့်စာရင်းအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ အသိပေး အပ်ပါသည်။
Container Vessel Scheduled for November 2021
Post date: 05/Nov/2021
ပို့ကုန်များ တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အရ သွင်းကုန်များလည်း တိုးမြှင့်တင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ကုန်သေတ္တာသင်္ဘောလိုင်း အသီးသီးမှ ခရီးစဉ်များ ပြန်လည်တိုးချဲ့ပြေးဆွဲရန် စီစဉ်ထားရှိသဖြင့် နိုဝင်ဘာလ တွင် လတ်တလော ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘော(၄၂)စီး ပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ပြေးဆွဲမည့်စာရင်းအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ အသိပေး အပ်ပါသည်။
Post date: 28/Oct/2021
Exceptionally high spring from 20.31 feet to 21.06 feet high above the chart datum are expected to occur in Yangon River during the period of November 4th to November 8th, 2021. Please be noted that it is not serious level of tide because the highest tide level have reached up to 22 feet above the chart datum in year 2014 and 2015, and this notice is normally issued whenever high tide of Yangon River is expected to reach over 20 feet high above the chart datum in order to take precautionary measures to the publish living near river foreshore area of Yangon City.
Container Vessel Schedule for October 2021
Post date: 05/Oct/2021
ပို့ကုန်များ တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်အရ သွင်းကုန်များလည်း တိုးမြှင့်တင်သွင်းနိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ကုန်သေတ္တာသင်္ဘောလိုင်း အသီးသီးမှ ခရီးစဉ်များ ပြန်လည်တိုးချဲ့ပြေးဆွဲရန် စီစဉ်ထားရှိသဖြင့် အောက်တိုဘာလ တွင် လတ်တလော ကုန်သေတ္တာတင် သင်္ဘော(၄၂)စီး ပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထပ်မံတိုးချဲ့ပြေးဆွဲမည့်စာရင်းအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင်များသို့ အသိပေး အပ်ပါသည်။
Post date: 24/Sep/2021
Exceptionally high spring from 20.18 feet to 21.39 feet high above the chart datum are expected to occur in Yangon River during the period of October 6th to October 11th, 2021. Please be noted that it is not serious level of tide because the highest tide level have reached up to 22 feet above the chart datum in year 2014 and 2015, and this notice is normally issued whenever high tide of Yangon River is expected to reach over 20 feet high above the chart datum in order to take precautionary measures to the publish living near river foreshore area of Yangon City.
Post date: 13/Sep/2021
Exceptionally high spring from 20.08 feet to 20.41 feet high above the chart datum are expected to occur in Yangon River during the period of September 20th to September 24th, 2021.
Post date: 31/Aug/2021
Exceptionally high spring from 20.05 feet to 21.13 feet high above the chart datum are expected to occur in Yangon River during the period of September 6th to September 12th, 2021. Please be noted that it is not serious level of tide because the highest tide level have reached up to 22 feet above the chart datum in year 2014 and 2015, and this notice is normally issued whenever high tide of Yangon River is expected to reach over 20 feet high above the chart datum in order to take precautionary measures to the publish living near river foreshore area of Yangon City
Post date: 13/Aug/2021
“Notice of High Tide"